Ny fanomanana ny nahandron’ny mpikambana | Grandir à Antsirabe
Ny fanomanana ny nahandron’ny mpikambana
Ny fanomanana ny nahandron'ny mpikambana
Isaky ny atoandro dia miara-misakafo eo amin’ny tokontanin’ny fikambanana ireo ekipan’ny Grandir à Antsirabe sy ny Rencontre Avec Dago, miara-mankafy ny sakafo matsiro nokarakarain’i Claudine sy i Josiane tam-pitiavana. Ndao hojerena ny sehatra misy azy ireo ao anatin’ny tapak’andro maraina.
Dingana 1 : Fiantsenana
Amin’ny 8 ora ! fotoanan’ny fiantsenana. I Josiane, arahana harona andeha hiantsena any Tsena sabotsin’Antsirabe, anisan’ny tsena lehibe indrindra eto amin’ny faritry ny ranomasim-be Indiana. Sarotra ihany ny tsy hahavery amin’nireto lalana be dia be. Tsy araka ny nieritreretana azy fa efa voalamina daholo ny rehetra ; samy manana ny toerany. Ny voankazo etsy andaniny, ny legioma etsy an-kilany raha mamakivaky ireo voninkazo, ny akanjo sy kiraro, ny fivarotana maro samy hafa. Ohatran’ireny toeram-pivarotana lehibe ireny fa tafo lanitra sy mientanentana kokoa. Josiane angamba efa mahafantatra tsianjery ny toerana.
Tazana avy ery alavitra ery tazana mitandahatra ireo mananasy, nividy dimy izy. Nifanena tamin’i Fabien izy, ankizy izay raisin’ny trano fampiantranoana vonjimaika tanana, nangtataka izy hitondra ny harona hahazoany vola kely. Mitombo mitombo ihany ireo voan-kazo sy legioma, kokombra, karaoty tetika, toto-kena, haricots verts, persily ary saosety ; ireo no ho karakarain’i Claudine anio
Fa inona no atao hoe Saosety ?
antsoina ihany ko aizy hoe Christophine any amin’ireo nosy frantsay, Chouchou izay raha any La Réunion ary sousou any Maurice, ity legioma ity dia hita manerana ny nosy. Mitovitovy amin’ny poara ngeza hafahafa izay izy, somary diana lavaka maromaro sy misy tsilotsilo kely. Mitovy amin’ny mahandro courgette ny mahandro azy, atao laoka na koa atao lasary.
Dingana 2 : ao an-dakozia
Rehefa tafaverina avy any an-tsena i Josiane dia anjaran’i Claudine indray izao. Mandrehatra afo saribao telo izy.
Riz cantonais miaraka amin’ny lasary no sakafo. Mananasy voatetika mamy tsara no tsindrin-tsakafo.
Arotsak’i Claudine ao anaty vilany ambony fatapera ny totokena, miampy voatabia sy sira. Ao anaty vilany hafa, mitsetsatsetsa ny tongolo, arotsaka ny haricot vert sy ny karaoty ary saosety. Manitra tokoa ny sakafo, maha-te hihinana sahdy.
Ny fatapera ? fandrahoana nenti-paharazana, afaka entina mifindrafindra, vita amin’ny vy ary ampiasaina miaraka amin’ny saribao. Hita any amin’ny tokantrano maro ity fitaovana ity, na any amin’ny mpivarotra hani-masaka na any anaty fiara fitaterana aza rehefa mandeha mitsangatsangana iny. Misy ihany koa ny maendy masikita miaraka aminy, arahina saosy voanjo na voatabia. Ampiasaina ihany koa izy amin’ny fanatonoana vomanga, na mangahazo na manendy mofo gasy, na mahandro vary, na manendy zavatra mamy na masira. Sarotra ny hamehezana ny tenda !
Amin’ny 11 ora sahady ! manomana tsara haingana i Claudie satria tokony vonona ny sakafo amin’ny 12ora30. Mbola mila mahandro vary, manendy atody ho an’ireo tsy mihinan-kena, mamaofy kokombra sy mametraka azy ambony latabatra. Tao anatin’izany rehetra izany no nilazany fa ankafiziny ny mahandro trondro ka matetikatrondro saosy no ataony ary mananasy no tsindrin-tsakafo. Indraindray izy mieritreritra sakafo hanomezana fahafaham-po an’ireo olona misakafo be.
Rehefa tsy ao an-dakozia izy ireo dia manentana mandritry ny hetsika atao an-davanandro na manampy an’i Viviane mikarakara ny tranon’ny Grandira na CHT.
« HISAKAFO ! HISAKAFO ! »
Ny feon’i Claudine no manerana ny birao. Vonona ny sakafo, fotoana fisakafoanana. Tafavory ireo mpiara-miasa rehetra, manararaotra ny fotoanan’ny fifampirazarana arahin’ny lanitra mangan’Antsirabe, ao anatin’ny firavoana sy sariaka.
Fankasitrahana lehibe ho an’ny mpahandronay izay tsy mitsahatra ny mandroso ny tsara kokoa isan’andro amin’ny fanomezana fahafaham-po ny ekipa rehetra.
Lire aussi : Hetsika fanentanana momba ireo ankizy miaina eny amin'ny lalana
MG	Teboka famantarana #6
Non classifié(e)	Ny fanomanana ny maraude